I Yoweri Kaguta Museveni dia mpanao pôlitika ogandey, filohan’ ny Repoblikan’ i Oganda nanomboka tamin’ ny taona 1986. Teraka tamin’ ny taona 1944 izy.
Teraka tao Ntungamo (ao amin’ ny faritra atsimo andrefan’ i Oganda) i Yoweri Kaguta Museveni. Zanaky ny mpanan-tany be, ao amin’ ny vondrona Baniankôle, izy. Mba ho fanomezam-boninahitra ny antokon-tafika faha-7 ao amin’ ny tafiky ny mpanjana-tany britanika atao hoe "Abaseveni" no nanomezana azy ny anarana hoe Museveni. Tao amin’ io antokon-tafika io izy no nanompo niaraka amin’ ny Ogandey anarivony maro nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Nianatra tao amin’ ny sekolin’ i Ntare izy avy eo nandalina siansa pôlitika sy toekarena tao amin’ ny Oneversiten’i Dar es-Salaam any Tanzania tamin’ ny taona 1967 hatramin’ ny taona 1970. Niditra tao amin’ ny fikambanan’ ireo saro-piaro amin’ ny tanindrazana henjam-pihetsika izy ka lasa filohan’ ny Front des étudiants africains révolutionnaires (USARF). Nifanerasera amin’ ny mpikambana ao amin’ ny Front de libération du Mozambique (Frelimo), izay niady tamin’ ny fahefana mpanjana-tany pôrtogey, koa izy ary nianatra ny paika momba ny ady anaty akata tamin’ izy ireo.
Tamin’ ny taona 1970 dia nody tany Oganda i Yoweri Museveni ka niditra tao amin’ ny fitondran’ ny filoham-pirenena Milton Obote. Taorian’ ny fanonganam-panjakana nataon’ i Idi Amin Dada tamin’ ny taona 1971 dia nandrositra any Tanzania izy ka nitarika ady anaty akata izay notohanan’ ny tafika tanzaniana. Niverina tao Oganda izy tamin’ ny taona 1979 raha voaongana ny fitondrana lian-dran’ i Idi Amin Dada vokatry ny fidiran’ ny tafik’ i Tanzania an-tsehatra. Tafatsangana indray ny governemanta sivily. Nankasitrahin’ ny vahoaka i Yoweri Museveni sy ny antokony Mouvement patriotique ougandais, nefa i Milton Obote no lany tamin’ ny fifidianana nanjakan’ ny hosoka sy ny hala-bato tamin’ ny taona 1980.
Nisitaka tany amin’ ny toeram-ponenany any Andrefana i Yoweri Museveni ka nangana ny National Resistance Army (NRA) tamin’ ny taona 1981. Rehefa rava ny fitondran’ i Obote ka azon’ ny NRA i Kampala dia niakatra teo amin’ ny fitondrana i Yoweri Museveni tamin’ ny volana Janoary 1986.
Niezaka hamerina ny fandriam-pahalemana ao Oganda, izay potiky ny ady an-trano, sy hampiainga indray ny teokarena i Yoweri Museveni. Nanangana governemantan’ ny firaisam-pirenena ahitana solontenan’ ny foko maro ao Oganda izy. Nosarahiny ny resa-pivavahana sy ny resaka pôlitika izay nifangaroharo tao Oganda. Tsy nankasitraka ny fisian’ ny antoko maro, izay noheveriny fa niteraka ny ady an-trano nahatonga ra mandriaka nandritra ny ampolo-taona maro teo amin’ ny firenena, izy. Nasandrany avo ny lamina tsy ahitana antoko pôlitika. Niova pôlitika izy taty aoriana ka nampanjaka ny liberalisma ary nanohana azy noho izany i Etazonia sy ny mpamatsy vola tandrefana. Nitarika ny Firaisambe Afrikana (Organisation de l’unité africaine, OUA) izy tamin’ ny taona 1991 hatramin’ ny 1992 ka lasa filamatra maneho ny mpitondra afrikana ao amin’ ny taranaka vaovao. Tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny taona 1996 izy dia tsy nisy mpifaninana ka lany tamin’ny 74 %n’ ny vato.
Ny tenantenan’ ireo taona 1990 dia kihon-dalana teo amin’ ny paikady ara-pôlitikan’ i Yoweri Museveni, izay nanana fikendrena hanitatra ny fanjakany ivelan’ i Oganda, ary ny ao anatiny kosa dia nivaona tsikelikely ny fitondrany ka nanjaka ny kolikoly. Nanohana ny lehiben’ ny mpioko roandey Paul Kagame izy. Avy eo nandray anjara betsaka tamin’ ny fanozongozonana ny fitondran’ i Mobutu Sese Seko tao Zaira (Repoblika Demôkratikan'i Kôngô ankehitriny). Nanameloka azy oho izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena noho izany fidirany an-tsehatra tany amin’ ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô izany. Rehefa tsapany fa maro mpanakiana sady mandany vola sy olona izany ady izany dia niala avy tao amin’ ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô miandalana ny andian-tafika ogandey nanomboka tamin’ ny taona 2001. Nanao sonia fifanaraham-pandriam-pahalemana Repoblika Demôkratikan' i Kôngô izy tamin’ ny volana Septambra 2002.
Tao Oganda, nitombo hatrany ny fahalemen' i Yoweri Museveni ary tamin’ izany koa dia nitombo hery ny mpanohitra izay avy ao amin’ ny MNR ihany. Nankininy tamin’ ny tafika ny fitondrany. Nomeny andraikitra lehibe tao amin’ ny fitodrana ny fianakaviany. Lany ho filohan’ ny Repoblika indray izy tamin’ ny nahazoany 69,3 % tamin’ ny taona 2001 nefa nitombo ny fanerena azony tamin’ ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay te hampizotra an’ i Oganda mankany amin’ ny demôkrasia. Nampanao fitsapan-kevi-bahoaka ka nahalany ny fiverenana amin’ ny fisian’ ny antoko pôlitika maro izy tamin’ ny volana Jolay 2005, nefa nampanovainy ny lalàmpanorenana mba hahafahany milatsaka hofidina fanintelony.
Tamin’ ny fitondrany dia afaka nirehareha amin’ ny fampitsaharana ny ady an-trano sy ny fifandrafiana ara-poko izy, indrindra koa tamin’ ny fampandrosoana ny toekarena sy ny ezaka nataony hiadiana amin’ ny aretina sida ary ny fikarakarany ny fampianarana. Na dia izany aza dia mbola miatrika ny ady atao amin’ ireo fiokoana tarihin’ ny Lord’s Resistance Army (LRA) izay mamotika ny faritra avaratra ao Oganda izy.
Ny fampielezan-kevitra nataon' i Yoweri Museveni mialoha ny fifidianana tamin’ ny volana Febroary 2006 dia nanjakan’ ny fihenjanan’ ny fitondrana, izay nampiseho hery famoretana sy fampitahorana tsy nisy toa azy hatramin’ izay, nikendreny an'i Kizza Besigye mpifanandrina aminy ao amin’ ny Forum pour le changement démocratique (FCD). Izany fivaonan’ ny fitondrana izany dia nanaratsy endrika an’ i Oganda teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena ka nampihena ny fanampiana avy any ivelany izay ilaina amin’ ny fampandrosoana ny toekaren’ i Oganda.
Lany indray tamin’ ny 60,75 %n’ ny vato izy tamin’ ny fifidianana natao teo ambany fanarahamason’ ny finakaviambe iraisam-pirenena tamin' io taona 2016 io, izay nahitana tsy fanaraha-dalàna nefa tsy dia nahitana hosoka be loatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoweri_Museveni&oldid=998421"
Voaova farany tamin'ny 10 Novambra 2020 amin'ny 19:36 ity pejy ity.